Sales & Drive Archives - Glory Assumption Space
၁) Sales Drive - Male – (5)Posts /လစာ -၂၅၀,၀၀၀ကျပ်/လှိုင်သာယာမြို့နယ်/ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောDistribution Co.Ltd တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ ၁) Sales Drive - Male – (5)Posts /လစာ -၂၅၀,၀၀၀ကျပ်/လှိုင်သာယာမြို့နယ်/ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ( ၂ ) နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမည်။ - ကားမောင်းနိုင်ရမည်။ - အသင်းအဖွဲ့ဖြင့်ဆောင်ရွက်နုိင်သုဖြစ်ရမည်။ - သင်္ကန်းကျွန်း နှင့်လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါကဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223785, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Driver – Male (5)Posts/ လစာ- ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Lubricant Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။စနေ၊တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။
Sales Driver – Male (5)Posts/ လစာ- ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ်/စမ်းချောင်းမြို့နယ်။
- အဝေးသင်ဖြင့်ကျောင်းဆက်မတက်သူများလျှောက်ထားနိုင် သည်။
- သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး (၂)နှစ်ရှိရမည်။
- လိုင်စင် အနက် (သို့) အညိုကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည်။
- Lubricant နှင့် Auto Mobile Field တွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။
Sales Driver – Male (5) Posts
Sales Driver – Male (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် + အခြားခံစားခွင့်များစွာ / တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ။
FMCG ရောင်းမောင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No – 09 263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09 263121101 , 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။
Sales Driver – Male (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော FMCG Trading Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Sales Driver – Male (5)Posts /လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် /လမ်းမတော်မြို့နယ် ။
-၁၀ တန်းအောင် (သို့မဟုတ်) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းဖြစ်ရမည် ။ -လိုင်စင်အနက်ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည် ။ -ရန်ကုန်လမ်းကျွမ်းကျင်ရမည် ။ -သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိရမည် ။
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Manufacturing Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Sales Driver – Male (5)Posts /လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။
-ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်) ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည် ။ -သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ (၁) နှစ် ရှိရမည် ။ -စကားပြော ပြေပြစ်ရမည် ။ -ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ဖြစ်ရမည် ။ -နယ်သွားနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ -ယဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိရမည် ။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော သင်္ဃန်းကျွန်း မြို့နယ် ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales Driver – Male (5)Posts /လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် / သင်္ဃန်ကျွန်းမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - Auto /Manual (Toyo Ace /Hiject ) မောင်းနှင်နိုင်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ - ကား Product များနှင့်ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံဦးစားပေးမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
SalesDrive – Male(5)Posts /လစာ -၂၅၀,၀၀၀/- ကျပ်/ ကမာရွတ်မြိုနယ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.SalesDrive – Male(5)Posts /လစာ -၂၅၀,၀၀၀/- ကျပ်/ ကမာရွတ်မြိုနယ်။ -တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ (သို့ )အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်မြင်ပြီး သူဖြစ်ရမည်။ -ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ -အသက်၂၂နှစ်မှ၃၅နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ -ယာဉ်မောင်းအတွေ့ အကြုံအနည်းဆုံး၂နှစ်ခန့်ရှိရမည်။ -နယ်ဝေးမောင်းနှင်ခြင်းအတွေ့ အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ -ရောင်း/မောင်းအတွေ့ အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ -ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ -ရန်ကုန်မြိုနယ်တွင်ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ -လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Driver - Male (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။ ကမာရွတ်တွင်ရှိသောCar Spare Parts & Accossories Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလို ရှိသည်။ Sales Driver – Male (5)Posts / Salary – 250000 Kyats / Kamaryut Township - ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၂၂ မှ ၃၀ နှစ်အတွင်းရှိရမည်။ - ယာဉ်မောင်း သက်တမ်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ၂ နှစ်ခန့်ရှိရမည်။ - နယ်ဝေးမောင်းနှင်ခြင်း အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ရောင်း/ မောင်း လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ - ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ - ရန်ကုန်မြို့တွင်းကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနှင်သွားလာနိုင်ရမည်။လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ နယ်ခရီးသွားလာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Driver - Male (5) Posts / Salary - 200,000 Above Kyat .
****************** Urgent Requirement ****************** မင်္ဂလာပါGASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောစမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိသော ကုမ္ပဏီများတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများလိုအပ်နေပါသည်။ 1 . Sales Driver - Male (5) posts / Salary -200,000 Above Kyat / Sanchaung Township . - ယာဉ်မောင်းသက်တမ်း (၂) နှစ်ရှိရပါမည် ။ - အရောင်းပိုင်းနှင့်ပက်သက်ပြီး လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိရပါမည်။ - ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူကို ဖြစ်ရရပါမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sales Driver - Male (5) Posts / Salary -200,000 (Above) Kyat .
****************** Urgent Requirement ****************** မင်္ဂလာပါGASနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောစမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော ကုမ္ပဏီများတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများလိုအပ်နေပါသည်။ 1. Sales Driver - Male – (5) Posts / Salary – 200,000 (Above) Kyat / Sanchaung Township . - Sales ပိုင်းနှင့် Driver ပိုင်းကိုတကယ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Driver နှင့်အတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ဖြစ်ရမည်။ - ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူလဲ ဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sale Drive & Marketing Executive – Male (10 )posts/ Salary- 300000Kyats
မင်္ဂလာပါ ။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Company ကြီးများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Sale Drive & Marketing Executive – Male (10 )posts/ Salary- 300000Kyats / Mayangone Township - အထက်ပါရာထူးနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - ရန်ကုန်မြို့တွင်းကျွမ်းကျင်စွာမောင်းနှင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - Construction Material Distribution နှင့်ပတ်သက်၍အတွေ့အကြုံ့ရှိရမည်။ - ကားမောင်းကျွမ်းကျင်ရမည်။ - သက်တမ်းရှိလိုင်စင်ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail-gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone	No.-09-262223785,09-977397705,09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ	–MyanmarProfessionalTraining Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Drive - Male (5) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Sales Drive – Male (5) Posts /Salary- 250000 Kyats/ PazunTaung Township - Experience ရှိရမည်။ - စနေ၊တနင်္ကနွေပိတ်ပါသည်။ - ထမင်းကျွေး၊ကားခပေးပါသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone No - 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )
Sale Drive –Male(3)Posts
- ဘွဲ့ရ (သို့မဟုတ်) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - ကားကြီးမောင်းနိုင်ရမည်။ - လိုင်စင်အနီ(သို့မဟုတ်)အညိုဖြစ်ရမည်။ - အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၃နှစ်ရှိရမည်။ - အသက်၂၂နှစ်မှ ၃၂ကြားဖြစ်ရမည်။ - လိုအပ်ပါက နယ်ခရီးသွားနိုင်ရမည်။
1.Sales Drive, Male (5) posts
၁၀ တန်းအောင် (သို့) အဝေးသင် တက်ရောက်နေသူဖြစ်ရမည်။ ကားမောင်းကျွမ်းကျင်ရမည်။ အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Sales Drive -Male (3)posts